काठमाडौं। केही दिन अघि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का डाईरेक्टर जनरल डा. टेड्रोस अद्नोमले अब कोरोना भाईरसको इपिसेन्टर अमेरिका बन्छ भनेर भबिष्यबाडी गरेका थिए। नभन्दै अहिले यो समाचार तयार पार्दासम्म बिश्वमै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको संख्यामा अमेरिकाले अरु देशलाई धेरै तल छोडेको छ।
शुरुमा कोरोना प्रभावित देश चीनमा अहिले नयाँ संक्रमित एका दुई भेटिने गरेका छन् भने अर्को बढी प्रभावित देश ईटाली भन्दा बिश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका कोरोनाबाट धेरै प्रभावित भैसकेको छ।
अमेरिकामा २ लाख १५ हजार ३५७ जनालाई कोभिड-१९ को संक्रमण भैसकेको प्राप्त पछिल्लो जानकारीमा उल्लेख छ भने दोश्रो बढी संक्रमित देश ईटालीमा १ लाख १० हजार ५७४ जनालाई कोरोना भाईरसको संक्रमण छ।
अमेरिकामा जम्मा संक्रमितमा ४० प्रतिशत बिरामी न्यूयोर्क शहरका मात्रै रहेका छन्। नेपालीहरुको पनि निकै बाक्लो बसोबास रहेको न्यूयोर्क शहरमा यसरी अत्यधिक बासिन्दा कोरोना भाईरसको संक्रमणमा पर्दा सम्पूर्ण नेपाली समुदाय चिन्तित भएकोछ।
यसै सन्दर्भमा हामीले हालै अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा बसोबास गर्ने प्रवासी नेपाली एकता मंचका केन्द्रीय सदस्य राधाकृष्ण देउजासँग सम्पर्क गरेर केहि कुरा सोधेका थियौ। त्यहि संवादको अंश:
देउजाजी, अहिलेको कोरोना महामारीमा नेपालीहरुको त्यहाँको अवस्था वास्तवमा कस्तो छ?
यताको समग्र अवस्था ठिक छैन। तरपनि नेपाली समुदाय बाहिरपनि जोगिएर वा घरभित्रै बसेको हुनाले त्यस्तो धेरै संक्रमित भने छैनन्।
नेपालको एउटा टिभी च्यानलको कुराकानीमा एकजना त्यहिँका पत्रकारले भनेको अनुसार त ३०० भन्दा बढी नेपाली अमेरिकामा संक्रमित भैसकेका छन् भन्ने छ नि ?
त्यति त हैन। पुरा अमेरिकाभरिमा १५० जना जति नेपाली कोरोना संक्रमित भएको हाम्रो संस्थाको अनुमान छ। तर नेपाली समुदायले अलि संक्रमण लुकाउने गरेको पाईएकोले यो संख्या केहि बढी हुन पनि सक्छ।
यसरी संक्रमण लुकाउँदा अरुलाई झन् बढि असर पुग्दैन र ?
त्यसो गर्नु एकदम गलत छ। न्यूयोर्क जस्ता शहरमा धेरैजना एउटै फ्ल्याटमा बस्ने वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने यो हानिकारक छ। आफू तुरुन्तै अस्पताल जान्छु बरु निको भएर आईहाल्छु किन सुनाउने भन्ने मानसिकताले अरुलाई संक्रमण सार्ने झन् खतरा बढ्यो।
तपाई यो संक्रमण लुकाउने कुरामा के भन्नुहुन्छ ?
म स्वयं र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट आफूमा देखिएको लक्षण साथी तथा परिवारमा शेयर गरेर तुरुन्त कोरोना टेष्टिङ सेन्टर वा अस्पताल जान अनुरोध गर्छु।
यस्तो कठिन परिस्थितिमा तपाईँहरुको संगठनले चाहिँ के कस्तो काम गर्दै छ त ?
हामी सबै संस्था तथा संगठन एक भएर सचेतना जगाउँने तथा परेको सहयोग गर्ने काममा जुटिसकेका छौ।
हामी न्यूयोर्कमै बस्ने भएकोले यहाँ बढी संक्रमित पनि भएकोले हस्पिटलाईज भएका बिरामीका नेपाली आफन्तलाई फोन गरेर ढाढस दिने, चाहिएको कुनैपनि सहयोग पुर्याउने गर्ने गरेका छौ।
पछिल्लो नेपालीको अवस्था बारे केहि समाचार छ तपाईंसँग?
पछिल्लो खबर अनुसार कोरोनाबाट संक्रमित व्यवसायी तथा न्यूयोर्कका बरिष्ठ समाजसेवी जीवन(जुंग) बम सहित ६ जना नेपाली सञ्चो भएर घर फर्केका छन्। उपचार गराईरहेका शम्भु मोक्तानजी, निमा शेर्पा, उनकी पत्नी र दुई जना छोराछोरी निको भएर फर्केका हुन् ।